चुनाव जित्नेहरूले के गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः जेष्ठ १७, २०७४ - साप्ताहिक
चुनाव जित्नेहरूले के गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
जेष्ठ १७, २०७४
सर्वप्रथम त शपथ अनि पदभार ग्रहण, त्यसपछि जनताप्रति उत्तरदायी भएर समर्पित सेवा ।
दुर्गा ढकाल, पुस्तक व्यवसायी
जित्नेहरूले चुनावअघि घोषणापत्रमा जुन–जुन काम गर्छु भनेर जनताको मत बटुलेका छन्, ती काम गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक नारीलाई आफ्नो काम सकेर वा कतैबाट फर्कंदा जतिबेला पनि म आफ्नै सुरक्षित देशमा छु भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।
आफ्नो कार्यालयमा पूरै दिन बसेर अब मैले आफ्नो नगर वा गाउँको विकास एवं तपाईंहरूको सेवा कसरी गर्नसक्छु ? भनेर जनतासँग सोधून् जस्तो लाग्छ ।
आशान्त शर्मा, रंगकर्मी
चुनाव जित्नेले सर्वप्रथम त फूलमाला तथा अबिर लगाएको देख्यौं । अब चाहिँ जुन दल वा आस्थाको भए पनि ती दलको कार्यकर्ता भएर होइन सम्पूर्ण जनताको भएर देखाउनु अपरिहार्य छ ।
प्रदीप भट्टराई, चलचित्र निर्देशक
भोट माग्दा जे वाचा गरेका थिए, कम्तिमा त्यसको ५० प्रतिशत मात्र काम गरे पनि धन्य हुन्छौं हामी ।
आमिर शेख, गायक
पहिलो कुरा चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिहरूले सबै जनतालाई हाँसेर दाँत नै देखाउनु पर्‍यो किनभने उहाँहरूले मुस्कानमय सेवा दिन्छु भन्नुभएको छ । दोस्रो कुरा, अब तपाईं कुनै एक पार्टीको प्रतिनिधि नभै सबै पार्टी र आम जनताको प्रतिनिधि भएको अनुभूति जनतालाई गराउनु पर्‍यो । तेस्रो कुरा, तपाईंले चुनावमा के–के गर्छु भनेर जनताका अगाडि बोल्नुभएको थियो वा घोषणापत्रमा लेख्नु भएको थियो अब फेरि आफैंले एक पटक पढ्नुहोस् । आफ्नो घोषणापत्र मात्र नपढ्नुहोस् अरूको घोषणापत्र पनि पढ्नुहोस्, किनभने तपाईंको घोषणापत्रमा छुटेको कुरा अर्काे पार्टीको घोषणा पत्रमा छ कि ?
कमल वली, गायिका/नेतृ
रोकिएका कामहरू पूरा हुन्, जस्तै— सडक निर्माण । चोकमा ट्राफिक प्रहरीको रेड तथा ग्रीनलाइटको व्यवस्था होस् । घरघरमा खानेपानी सुलभ होस् । बोलेर भन्दा काम गरेर देखाउन् ।
सरिता गिरी, रंगकर्मी
कर्मचारीतन्त्रीय गोमनले डसेका र सर्वदलीय जुँगाले चुसेका भुइँमान्छेहरूका लागि कामै नगर्ने वा बिग्रिएकै भए पनि हाम्रा लागि एउटा कोही त छ भन्ने अनुभूति दिनसक्ने निष्पक्ष स्थानीय संयन्त्रको स्थापना गर्ने ।
पद बहालीसँगै स्थानीय क्षेत्रका समस्या समाधानको दिशामा उन्मुख हुन् । काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी छिटोभन्दा छिटो पुरेर धुलोमुक्त पारून् ।
विदुर गिरी, सञ्चारकर्मी
पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर सामाजिक भावनाले एउटा असल समाजसेवीका रूपमा प्रस्तुत हुन् । त्यसपछि समाज आफैं राम्रो बन्छ र आफै व्यवस्थित पनि हुन्छ ।
नीराजन लुइँटेल, इभेन्ट आयोजक
आम मतदाताको सम्मान गरून् । टोल तथा समाजको समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि पहल थालून् । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमा फरक छ ।
शिवम अधिकारी, निर्देशक
अविर–माला लगाएर, कार्यकर्ताहरूको लस्करका साथ फोटो खिचाउँदै फेसबुकमा अपलोड गर्छन् होला नि, अरू त के नै गर्लान् र ?
सुगरिका केसी, मिस नेपाल २००५
हाम्रो सहरमा धुलो नउडोस्, अनि जाम पनि नहोस् ।
यागेन्द्रमेहर बज्राचार्य, फेसन डिजाइनर
ठूला सहरका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले गाँस, बास कपासले मात्र सुन्दर र समृद्ध सहर बन्दैन, त्यसका लागि कला साहित्य पनि मुख्य पाटो हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।
केदार श्रेष्ठ, रंगकर्मी
कसले जित्यो भन्दा पनि आमजनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । काठमाडौंको हकमा धुवाँ, धुलो अनि महँगीले विकराल रूप लिँदै गएको छ । पहिलो काम त त्यहीबाट थाल्नुपर्छ ।
सञ्जय गुप्ता, अभिनेता/आरजे
सफा सडक एवं व्यवस्थित ट्राफिक प्रणाली तत्कालको आवश्यकता हो ।
रीमा गुरुङ होडा, गायिका
सर्वप्रथम त अनुशासन र पारदर्शिता देखाउन् भन्ने अपेक्षा राख्छु, धेरै आशा त के राख्नु र खै ?
जीवन भट्टराई, अभिनेता
सडकमा बेवारिसे भएर बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धा, छाडा कुकुर तथा पशुहरूको उचित व्यवस्थापन।
बबिरोशा ढकाल, गायिका
चुस्त–दुरुस्त प्रशासन ।
कपिल द्वा, चलचित्र प्रदर्शक
सबैभन्दा पहिले त प्रचार प्रसारका क्रममा फोहोर पारिएका भित्ताहरू सफा गरून् । त्यसपछि आफ्ना गाउँ–ठाउँका समस्या के छन् त्यही आधारमा प्राथमिकता तोकेर काम सुरु होस् ।
दीपाश्री निरौला, अभिनेत्री/निर्देशक
गफभन्दा बढी काम होस् ।
धुलोमाण्डुबाट हराभरा काठमाडौंमा परिवर्तन ।
दीप विमली, सञ्चारकर्मी
राम्रो अनि सफा बाटो ।
भूमि रिमाल, सौन्दर्यकर्मी
प्रकाशित :जेष्ठ १७, २०७४
गर्मी चर्किएका बेला के गर्न मन लाग्छ ?
अनमोलको जीवन हल्ला जस्तो असामान्य रहेनछ
सुव्रतले गरे सुश्री सम्पत्तिको घोषणा
कहाँ–कहाँ लाग्छ माघी मेला
सहयोग गर्दा खुसी लाग्छ
साप्ताहिकलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ? जेष्ठ ६, २०७५
आफूलाई फिट राख्न के गर्नुहुन्छ ? जेष्ठ १, २०७५
गर्मी चर्किएका बेला के गर्न मन लाग्छ ? वैशाख २५, २०७५
लङ ट्वाइलेट जाँदा के सोच्नुहुन्छ ? वैशाख १८, २०७५
२०७५ मा के गर्छु भन्ने आँट कस्नुभएको छ ? वैशाख १०, २०७५
२०७४ साललाई के कारणले सम्झनुहुन्छ ? वैशाख १, २०७५
यो वर्षको उत्कृष्ट चलचित्र कुन हो ? चैत्र २५, २०७४
तपाईंले कहिल्यै कसैलाई ढाँट्नुभएको छ ? चैत्र १८, २०७४
तपाईं कवि बन्नुभयो भने पहिलो कविता कस्तो होला ? चैत्र १२, २०७४
नेपाली चलचित्रको कथा किन मजबुत हुन नसकेको होला ? चैत्र ८, २०७४